လုပ်ရတာလွယ်ကူ၊ စားလို့လည်းကောင်းပြီး ဝိတ်ကိုလည်း ထိန်းပြီးသားဖြစ်စေမယ့် ထောပတ်သီးသုပ် - For her Myanmar
ဝိတ်ကျမကျသိချင်ရင် ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကိုသာ ဝင်ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့ကွာ…
အဟီး နှင်းအိဦး ဆိုတဲ့ အက်ဒ်မင်လေးဟာ စိတ်မပါတဲ့အချိန်တွေမှာတော့ မာလာရှမ်းကောတွေ၊ ဟော့ပေါ့တွေကို မထစတမ်းကြိတ်တတ်ပေမဲ့ စိတ်ကောင်းဝင်ပြီး ဗိုက်ကကြွက်သားလေးတွေကို အားနာတဲ့အချိန်မှာတော့ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ အစားအသောက်လေးတွေကို ချက်ပြုတ်ပြီးစားတတ်ပါတယ်။
အဲဒီအထဲမှာ ဒီထောပတ်သီးသုတ်လေးကလည်း နှင်းရဲ့လက်တည့်စမ်းခြင်းကို ခံခဲ့ရသူလေးပေါ့။ ဒီအသုပ်လေးကတော့ သူ့တစ်မျိုးတည်းစားလည်း ကောင်းသလို ပေါင်မုန့်ထဲညှပ်စားလို့လည်း ကောင်းတဲ့ recipe လေးမို့ ယောင်းတို့လည်း ကြိုက်နှစ်သက်ကြမှာ ကျိန်းသေပါတယ်နော်.. မကြိုက်လည်းကြိုက်ကွာ.. မရဘူး ပြောပြချင်နေပြီ 😛
ထောပတ်သီးသုပ်လေး လုပ်ဖို့ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကတော့…
Related Article >>> ကျန်းမာပြီး လှပစေမယ့် ငါးအရေခွံသုပ်
အရင်ဆုံး ကြက်ဥကို လုံးဝကျက်သွားတဲ့အထိ ပြုတ်လိုက်ပြီး အတုံးသေးသေးလေးတွေ လှီးထားပါ။
ထောပတ်သီးကိုလည်း အတုံးသေးသေးလေးတွေလှီးပြီး အကြေချလိုက်ပါ။
ပြီးရင် ပန်းကန်တစ်လုံးထဲမှာ ကြက်ဥ၊ ထောပတ်သီး၊ သံလွင်ဆီတို့ကိုရောပြီး အနှစ်ဖြစ်သွားတဲ့အထိ ချေလိုက်ပါ။
အနှစ်ဖြစ်သွားတာနဲ့ ဒိန်ချဉ်အနည်းငယ်ကိုထည့်ပြီး သမသွားအောင် မွှေလိုက်ပါ။
ဒိန်ချဉ်ထည့်ပြီးတာနဲ့ သံပုရာသီးကို အရည်ညှစ်ပြီး အပေါ်ကနေဖြန်းလိုက်ပါ။
ပြီးတာနဲ့ ဆား၊ ငရုတ်ကောင်းမှုန့်ကို အရသာမြည်းပြီး လိုသလောက်ထည့်လိုက်ရင်တော့ လွယ်ကူပြီး စားလို့ကောင်းတဲ့အပြင် ကျန်းမာရေးနဲ့လည်း ညီညွတ်တဲ့ ထောပတ်သီးသုတ်လေးရပြီပေါ့။
အကယ်၍ ပေါင်မုန့်နဲ့တွဲစားချင်တယ်၊ ဝိတ်လည်းမတက်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ Whole Grain Bread လို့ခေါ်တဲ့ ပေါင်မုန့်ညို (သို့) အကြမ်းနဲ့လည်း တွဲဖက်ပြီး ထောပတ်သီး Sandwich အနေနဲ့ သုံးဆောင်လို့ရပါတယ်ရှင်။
ဘယ်လိုလဲယောင်းတို့? အရမ်းခက်လွန်းလို့ လုပ်ရတာ လက်တွန့်သွားပြီလားလို့?
ဒီအသုပ်လေးက ကယ်လိုရီနည်းပေမဲ့ အာဟာရဓာတ်တွေ အရမ်းကြွယ်ဝတာမို့ သားသားမီးမီးလေးတွေကိုလည်း အဆာပြေအနေနဲ့ ထည့်ပေးလို့ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Gym ဆော့လို့ ညစာရှောင်နေတဲ့လူတွေလည်း ညအဆာပြေအနေနဲ့ စိတ်ချလက်ချစားသုံးလို့ရတာမို့ နှင်းရဲ့ပေါက်ကရလေးဆယ် Recipe လေးကို နှစ်ခြိုက်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်…
နောက်ကျရင်လည်း ဒါမျိုးလေးတွေ စိတ်ကူးပေါက်ရင်ပေါက်သလို ချက်စားဦးမှာမို့ စောင့်မျှော်ပေးကြပါဦးလို့။
ဝိတျကမြကသြိခငျြရငျ ပါဝငျပစ်စညျးတှကေိုသာ ဝငျဖတျကွညျ့လိုကျတော့ကှာ…
အဟီး နှငျးအိဦး ဆိုတဲ့ အကျဒျမငျလေးဟာ စိတျမပါတဲ့အခြိနျတှမှောတော့ မာလာရှမျးကောတှေ၊ ဟော့ပေါ့တှကေို မထစတမျးကွိတျတတျပမေဲ့ စိတျကောငျးဝငျပွီး ဗိုကျကကွှကျသားလေးတှကေို အားနာတဲ့အခြိနျမှာတော့ ကနျြးမာရေးနဲ့ညီညှတျတဲ့ အစားအသောကျလေးတှကေို ခကျြပွုတျပွီးစားတတျပါတယျ။
အဲဒီအထဲမှာ ဒီထောပတျသီးသုတျလေးကလညျး နှငျးရဲ့လကျတညျ့စမျးခွငျးကို ခံခဲ့ရသူလေးပေါ့။ ဒီအသုပျလေးကတော့ သူ့တဈမြိုးတညျးစားလညျး ကောငျးသလို ပေါငျမုနျ့ထဲညှပျစားလို့လညျး ကောငျးတဲ့ recipe လေးမို့ ယောငျးတို့လညျး ကွိုကျနှဈသကျကွမှာ ကြိနျးသပေါတယျနျော.. မကွိုကျလညျးကွိုကျကှာ.. မရဘူး ပွောပွခငျြနပွေီ 😛
ထောပတျသီးသုပျလေး လုပျဖို့ ပါဝငျပစ်စညျးတှကေတော့…
Related Article >>> ကနျြးမာပွီး လှပစမေယျ့ ငါးအရခှေံသုပျ
အရငျဆုံး ကွကျဥကို လုံးဝကကျြသှားတဲ့အထိ ပွုတျလိုကျပွီး အတုံးသေးသေးလေးတှေ လှီးထားပါ။
ထောပတျသီးကိုလညျး အတုံးသေးသေးလေးတှလှေီးပွီး အကွခေလြိုကျပါ။
ပွီးရငျ ပနျးကနျတဈလုံးထဲမှာ ကွကျဥ၊ ထောပတျသီး၊ သံလှငျဆီတို့ကိုရောပွီး အနှဈဖွဈသှားတဲ့အထိ ခလြေိုကျပါ။
အနှဈဖွဈသှားတာနဲ့ ဒိနျခဉျြအနညျးငယျကိုထညျ့ပွီး သမသှားအောငျ မှလေိုကျပါ။
ဒိနျခဉျြထညျ့ပွီးတာနဲ့ သံပုရာသီးကို အရညျညှဈပွီး အပျေါကနဖွေနျးလိုကျပါ။
ပွီးတာနဲ့ ဆား၊ ငရုတျကောငျးမှုနျ့ကို အရသာမွညျးပွီး လိုသလောကျထညျ့လိုကျရငျတော့ လှယျကူပွီး စားလို့ကောငျးတဲ့အပွငျ ကနျြးမာရေးနဲ့လညျး ညီညှတျတဲ့ ထောပတျသီးသုတျလေးရပွီပေါ့။
အကယျ၍ ပေါငျမုနျ့နဲ့တှဲစားခငျြတယျ၊ ဝိတျလညျးမတကျခငျြဘူးဆိုရငျတော့ Whole Grain Bread လို့ချေါတဲ့ ပေါငျမုနျ့ညို (သို့) အကွမျးနဲ့လညျး တှဲဖကျပွီး ထောပတျသီး Sandwich အနနေဲ့ သုံးဆောငျလို့ရပါတယျရှငျ။
ဘယျလိုလဲယောငျးတို့? အရမျးခကျလှနျးလို့ လုပျရတာ လကျတှနျ့သှားပွီလားလို့?
ဒီအသုပျလေးက ကယျလိုရီနညျးပမေဲ့ အာဟာရဓာတျတှေ အရမျးကွှယျဝတာမို့ သားသားမီးမီးလေးတှကေိုလညျး အဆာပွအေနနေဲ့ ထညျ့ပေးလို့ရပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ Gym ဆော့လို့ ညစာရှောငျနတေဲ့လူတှလေညျး ညအဆာပွအေနနေဲ့ စိတျခလြကျခစြားသုံးလို့ရတာမို့ နှငျးရဲ့ပေါကျကရလေးဆယျ Recipe လေးကို နှဈခွိုကျကွမယျလို့ထငျပါတယျနျော…
နောကျကရြငျလညျး ဒါမြိုးလေးတှေ စိတျကူးပေါကျရငျပေါကျသလို ခကျြစားဦးမှာမို့ စောငျ့မြှျောပေးကွပါဦးလို့။
Tags: avocado, Body, fit, goal, Health, Healthy, salad, Wealth